Ciidamada Ahlu Sunna oo Caawa la wareegay Xarunta Degmada Dhuusamareeb | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Ciidamada Ahlu Sunna oo Caawa la wareegay Xarunta Degmada Dhuusamareeb
Ciidamada Ahlu Sunna oo Caawa la wareegay Xarunta Degmada Dhuusamareeb
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Xoogaga Ahlu Sunna ayaa waxay caawa si buuxdo ula wareegeen gacan ku haynta Xarunta Degmada Dhuusamareeb, xilli lagu waday in Ciidamada Dowladda ay si rasmi ah ula wareegaan amniga Xarunta Degmada.
Ciidamada Ahlu Sunna oo aad u fara-badan ayaa waxaa lagu arkayaa gudaha iyo dibadda ee Xarunta Degmada Dhuusamareeb, waxayna kaga hormareen Ciidamada Dowladda ee ku sugan magaalada.
Wararka ayaa sheegaya in Ciidamada Ahlu Sunna ay ku amrayn inay isaga baxaan ciidan yar oo ka tirsan kuwa Galmudug oo horey u qaabilsanaa ilaalinta amniga ee Xarunta Degmada Dhuusamareeb.
Weriyeyaasha Magaalada Dhuusamareeb ayaa soo sheegaya in Ciidamada Dowladda ay isu diyaarinayeen inay la wareegaan Xarunta Degmada, balse ay cadahay in iminka looga hormaray.
Waxaa sii xoogeysanaya khilaafka u dhaxeeya Dowladda Federaalka iyo Ahlu Sunada qaybta ka ah Maamulka Galmudug, waxayna labada dhinac ku hardamayan maamulka cusub ee loo yegleelayo dadka reer Galmudug.
Ciidamada Dowladda ayaa waxay caawa rasaas ku furayn Xarunta Inji ee Magaalada Dhuusamareeb, oo ka mid ah meelaha uu magaalada ka degan yahay Madaxa Xukuumadda Galmudug, Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, oo sidoo kale ka tirsan Masuuliyiinta Ahlu Sunada Gobolada Dhexe.
Ciidamada Dowladda ayaa la sheegay inay weerarka gaysteen, xilli uu halkaasi ku sugnaa Sheekh Maxamed Cali Xasan, isla-markaana uu ka badbaaday.
Weerarkan ayaa waxaa uu ku soo aadayaa, xilli Ahlu Sunada Galmudug ay ka biyo diiday Guddiga Farsamada Dhismaha Galmudug, ee ay magacawday Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliya, iyadoona ay Ahlu Sunna taasi bedelkeeda soo magacawday guddi kale.
Ugu dambeyn, Ahlu Sunada Galmudug iyo Dowladda Federaalka oo ay soo ifbaxeyso inay isu hayaan gacan ku haynta Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa laga cabsi qabaa inay qalqal ku keenaan amniga magaalada.
la wareegay dhuusamareeb
Xoogaga Ahlu Sunna